Soo iibso Obeticholic Acid (459789-99-2) hplc = 98% | AASraw
/ Products / R & D Reagents / Obeticholic budada acid
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaam qiyaaseed oo ah budada Aseticholic Acid (459789-99-2), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Dufanka acid Obeticholic waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo PBC dadka qaangaarka ah waxaana mararka qaar loo isticmaalaa daroogo kale oo loo yaqaan 'ursodeoxycholic acid' (UDCA). Cudurka 'cholangitis' ee aasaasiga ah (PBC) waa cudur beerka joogtada ah oo si tartiib ah u burburiya qulqulka xiidmaha ee beerka.
Fiidiyowga Obeticholic Acid Video
Foostada Aceticholic Acid Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Foostada Aceticholic Acid
Formula kelli: C26H44O4
Miisaankani waa: 420.63
Dhibcaha Biyaha: 108-110 ° C
Isticmaalka Agabka Aashitka ah ee Obeticholic Acid ee isticmaalka wakiilka Antineoplastic
Magaca Guud: Daawada Obeticholic Acid (OH BET I KOE li AS id)
Magaca Calaamadda: Ocaliva
Isticmaalka budada ah ee loo yaqaan 'Obeticholic Acid'
Daawadan waxaa loo isticmaali karaa kali ahaan ama daaweyn isku dhafan oo loogu talagalay cudur beerka ah (oo ah kan ugu horreeya ee "cholangitis-PBC"). Cudurkan wuxuu si tartiib ah u burburiyaa qulqulka xiidmaha ee beerka. Marka qulqulka xitaa waxyeello gaarsiisan, walxaha waxyeelada leh waxay ku dhisi karaan xitaa xargaha iyo beerka. Nooca kiimikada Aceticholic Acid waxay u shaqeysaa adigoo sababaya beerkaaga si aad u yar u sameysaan, iyo ka caawinta dheecaanka ka soo baxa beerka. Obeticholic Acid-ka ayaa laga yaabaa in ay gacan ka geysato tartiib-tartiib tartiib-tartiib ah oo loo yaqaan 'cholangitis' oo hoos u dhigta astaamaha sida daal, cuncun cun-cun, calool-xanuun, iyo indho-qallalan iyo afka.
Waa maxay qiyaasta loo yaqaan "Obeticholic Acid"
Qiyaasta Caanaha Qaaxada ee caadiga ah ee Cirrhosis Biliary
Qaadashada bilowga ah: 5 mg hadal afka ah hal mar maalintii
Qiyaasta Daryeelka: 5 mg afka ah hal jeer maalintii; haddii la yareeyo hoos udhaca fosfatase alkaline (ALP) iyo / ama bilirubin oo dhan aan la gaarin ka dib bilaha 3, kordhinta qiyaasta 10 mg hadal ahaan hal mar maalintii
Qadarka ugu badan: 10 mg / maalin
Isticmaalida: Daaweynta asaasiga "cholangitis" ee bilowga ah:
-Waxbarashada daaweynta dadka waayeelka ah ee dadka aan awoodin inay u dulqaado ursodeoxycholic acid (UDCA)
-In lagu daro UDCA dadka qaangaarka ah ee aan ku filneyn UDCA
Isbedelada Qiyaasta "Renal Dose"
Looma habeynin habayn.
Isbedelada Qaadashada Beerka
Qalitaanka beerka sahlan ee fudud (Jirka Pugh Class A): Looma habeynin hagaajin.
Dhexdhexaad u ah cillad beerka daran (Fasalka Ilmaha B iyo C):
Qiyaasta bilowga ah: 5 mg afka ah toddobaadkii hal mar
Qaadista daawada: 5 mg afka ah toddobaadkii hal mar; haddii la yareeyo hoos udhaca ALP iyo / ama guud ahaan bilirubin ka dib bilaha 3, kordhinta qiyaasta 5 mg 2 jeer toddobaadkii (ugu yaraan maalmaha 3 kala duwan), kadibna 10 mg 2 jeer toddobaadkii (ugu yaraan 3 maalmo ah ) iyadoo ku xiran jawaab-celin iyo dulqaad
-Ku qaadashada qiyaasta ah: 10 mg / maalin
- Waa in la ilaaliyaa bukaanka haddii ay dhacdo dareen-celin xun oo la xiriirta beerka
- Khatarta suurtagalka ah waa in la miisaamaa waxtarka bukaanka ee taariikhda ah waxyeellada xun ee beerka la xiriirta.
Bukaanka qaba qallayl aan dulqaadneyn:
-Ku dar antihistamine ama xiidka xayawaanka
-Ku dhiirigeliso qiyaasta 5 mg maalin kasta (bukaansocod aan ku habooneyn qiyaasta maalintii ee 5 mg) ama 5 mg afka ah hal mar maalintii (bukaanka aan u dulqaadan karin qiyaasta maalin waliba 10 mg)
-Waxaa si joogta ah u joojiya daaweynta ilaa toddobaadyada XNUM, ka dibna dib u bilaw qadar yar
-Ka joojinta joojinta ee bukaanada leh sii socdo, oo aan sii socon karin.
Sidee u shaqeeyaa bakteeriyada Aseticholic Acid
Obeticholic Acid waxaa loo isticmaalaa kali ahaan ama si wadajir ah oo loo isticmaalo ursodiol (Actigall, Urso) si loo daaweeyo cholangitis-ka bilowga ah (PBC) waa nooc ka mid ah cudurada beerka oo burburiya dhuumaha xiidmaha, kaas oo u oggolaanaya inuu ku sii jiro beerka kuna waxyeeleeyo) dadka aan qaadato ursodiol ama dadka aan si fiican uula dhaqmin ursodiol oo keliya. Daawada Obeticholic Acid waxay ku jirtaa dabaqada daawooyinka loo yaqaanno farnesoid agonists. Waxay ka shaqaysaa hoos u dhigida wax soo saarka xameetida beerka iyo sii kordhinta xitaa ka qaadista beerka.
Ka hor intaadan qaadin daawada Obeticholic Acid, u sheeg dhakhtarkaaga ama farmashiistahaaga haddii aad xasaasiyad u leedahay, ama haddii aad leedahay xasaasiyad kale. Waxyaabahan waxaa ku jiri kara waxyaabo aan firfircooneyn oo keeni kara xasaasiyadaha xasaasiyadda ama dhibaatooyinka kale. Kala hadal farmashiilaha wixii faahfaahin dheeraad ah.
Ka hor intaadan isticmaalin daawadan, u sheeg dhakhtarkaaga ama farmashiistahaaga taariikhdaada caafimaad, gaar ahaan: xayiraad xitaa xakamaynta.
Kahor qaliinka, u sheeg dhakhtarkaaga ama dhakhtarkaaga ilkaha wixii ku saabsan dhammaan waxyaabaha aad isticmaashid (oo ay ku jiraan daawooyinka dhakhtar qoro, daawooyinka laguu qoro, iyo alaabada dhirta).
Inta lagu jiro uurka, dawadan waa in loo isticmaalo marka si cad loo baahdo. Kala hadal khatarta iyo dheefaha dhakhtarkaaga.
Lama oga haddii daawadani ay u gudubto caanaha naaska. La tasho dhakhtarkaaga cuntada quudinta.
Aceticholic Acid Khat
Suuq-gare 'Obeticholic Acid for Sale'
Miyuu budada Asetical-ka ah ee loo yaqaan 'Obeticholic Acid'?
Daal, xanuunka afka / cunaha, ama garaaca wadnaha / degdega ah ayaa dhici karta. Haddii mid ka mid ah dhibaatooyinkaasi ay soo noqdaan ama ka sii daraan, u sheeg dhakhtarkaaga ama farmashiistaha markiiba.
Xasuusnow in dhakhtarkaagu u qoray dawadan sababta oo ah isaga ama iyada ayaa qirtay in faa'iidadaada ay tahay mid ka weyn halista waxyeelada. Dad badan oo daaweynaya daawadan ma laha waxyeello halis ah.
Inkasta oo daawadani loo isticmaalo daaweynta xinjirowga ilkaha ee aasaasiga ah (PBC), waxay sidoo kale keeni kartaa calaamadaha beerka qaarkood. U sheeg dhakhtarkaaga isla markiiba haddii aad leedahay calaamado sida maqaarka cusub ama ka sii daraya maqaarka, lallabbo / matag aan joojin, cunnoyin la'aan, calool xanuun / calool xanuun, indho xanuun / maqaarka, kaadida madow, murqaha / xanuunka lugta, lugaha barar / cagaha / caloosha, ama isbeddelada maskaxda / niyadda. Dhakhtarkaagu wuxuu kuu qori karaa daawooyin kale sida xayawaanka xayawaanka lagu xiro ama antihistamines, ama si ku meelgaar ah u joojiya / hagaajinta qiyaasta daawadaada si ay u caawiso maareynta waxyeelooyinka kale. Takhtarkaaga kala hadal khatarta iyo faa'iidooyinka qaadashada dawadan.
Xasaasiyad aad u daran ee daawadani waa mid dhif ah. Si kastaba ha noqotee, caawimaad caafimaad u raadso haddii aad dareento astaamo xasaasiyad dhab ah, oo ay ka mid yihiin: finan, cuncun / barar (gaar ahaan wajiga / afka / cunaha), madax-wareer daran, neefsashada oo dhibta.
Tani ma aha liis dhammeystiran oo saameyn liddigeed ah. Haddii aad aragto saameyno kale oo aan kor lagu taxay, la xiriir dhakhtarkaaga ama farmashiistaha.
Sida loo iibsado Obeticholic Acid-ka AASraw
Aceticholic Acid Roodhiga Roodhiga
Si aad u ogaato faahfaahinta macaamiisha (CSR) faahfaahinta, tixraacaaga